बालकृष्ण सम (चार एकाङ्कीबाट)
बालकृष्ण सम ( वि. सं. १९५९- २०३८ ) नेपाली साहित्यका महान् नाटककार हुन् । उनि कवि , कथाकार तथा निबन्धकार पनि हुन् । उनले रचेका कृतिहरुमा मुटुको व्यथा, अन्धवेग, मुकुन्दइन्दिरा, प्रेमपिण्ड, अमर सिंह , भिमसेनको अन्त्य, स्वस्नीमान्छे आदि नाटक प्रसिद्द छन् । उनि नेपाली साहित्यमा दु:खान्त नाटक परम्पराको थालनी र विकास गर्ने नाटककार हुन् । उनले सामाजिक, ऐतिहासिक र पौराणिक विषयको प्रयोग गरि उत्कृष्ट किसिमका पूर्णङ्की र एकाङ्की नाटकको रचना गरेका छन् । उनले आफ्ना नाटकका पध तथा गध दुवै थरि शैलीको परिष्कृत प्रयोग गरेका छन् । देशभक्ति र मानवतावाद उनका नाटकको मुख्य विषय हो । उनले रचेको एक चर्चित ऐतिहासिक लघु नाटक वा एकाङ्की ' नालापानी ' हो ।
शब्दार्थ - २. तलका शब्द र आर्थका बीच जोडा मिउलाउनुहोस् :
छाउनी – सैनिक शिविर
देह ​ – शरीर
बिरानो – पहिले नदेखेको
तन्द्रा – निद्राको पहिलो
धीत ​– तिर्सना
आत्मसमर्पण – अर्काको अधिनमा रहने काम
यश ​ – कीर्ति
विलम्ब – ढिलो
समर ​ – युद्ध÷लडाई
चमर ​– चौरीगाईको पुच्छर
द्रुत ​ – छिटो
ममता – माया
पठन ​ – बोध
पठनबोध - प्रश्नहरु:
१. तलको नात्यांश पढी सोधिएको प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस् । (अनुच्छेद पुस्तकबाट पढ्नुहोस )
क)'नालापानिमा ' नाटकमा धरतीले नेपाली विरहरुलार्ई केकस्तो आह्वान गरेको छ ?
उत्तर: बालकृष्ण समको जन्म वि.सं. १९५९ माघ २४ गते ज्ञानेश्वर, काठमाडौँमा सम्भ्रान्त राजा परिवारमा भएको थियो । उनको आइ. एसीसम्मको अधययन गरेको थिए । उनी कवि, कथाकार तथा निबन्धकार पनि हुन् । उनले रचेका कृतीहरुमा मुटुको व्यथा, अन्धवेग, मुकुन्द इन्दिरा, प्रेमपिण्ड, अमर सिंह, स्वास्नीमान्छे आदि आदि नाटक प्रसिद्ध छन् । उनी नेपाली साहितयका दुखान्त नाटक परम्पराको थालनी र विकास गर्ने नाटककार हुन् । उनले सामाजिक, ऐतिहासिक र पौराणिक विषयको प्रयोग गरी उत्कृष्ट कसिममा पूर्णाङ्की र एकाङ्की नाटकको रचना गरेका छन् । उनले रचेको एक चर्चित ऐतिहासिक लघु नाटक वा एकाङ्की ‘नालापानी’ हो ।
ख) माथिको नात्यांशका आधारमा ' नालापानिमा ' नाटकमा अभिव्यक्त देशभक्तिको वर्णन गर्नुहोस् ।
मातृभूमिको ऋण बुझाउन
बिजुलीझैं दौडेर बिजुलीमा
आएँ नआई किन म छोड्थें
यो प्रान बोकेर अँजुलिमा !
उत्तर : देहाराद्रुनको किल्लामा उपचार गराइरहेको नरे कार्कीको हो ।
आ) यस भनाइको तात्पर्य के हो ?
उत्तर: यस भनाइको तात्पर्य देशभक्तिको भाव र उत्कृष्ट प्रेम हो ।
इ) मातृभूमिको ऋण किन बुझाउनु पर्छ ?
उत्तर :आफ्नो जन्मलाई सार्थक पार्न मातृभूमिको ऋण चुकाउनु पर्छ ।
ई) उक्त अंश कुन सन्दर्भमा भनिएको हो ?
उत्तर :उक्त अंश नरे कार्की पीडाले छटपटाउँदै अंग्रेजहरुको किल्लामा औषधोपचार गराउन गएको सन्दर्भमा उसलाई ढाढस दिन भनिएको हो ।
उ) यस सन्दर्भपछि नाटकमा विकसित प्रमुख घटना उल्लेख गर्नुहोस् ।
उत्तर : यस सन्दर्भपछि नरे कार्की जुरुक्क उठेर भाग्न खोज्छ । त्यही बेला उसलाई हल्ट गरिन्छ ।
१) आफ्नो कुनै शुभेच्छुक ( साथि, सहयोग आदि )ले राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार पाएकोमा हर्ष प्रकट गर्दै पत्रिकामा छाप्ने ' बधाई ज्ञापन ' को नमुना तयार गर्नुहोस् ।
उत्तर : हार्दिक बधाई
२) २०६७ को तमु- ल्होसारको उपलक्ष्यमा आफन्त, इष्टमित्र र शुभचिन्तकहरुलाई बाँड्ने शुभकामना पत्रको नमुना तयार गर्नुहोस् ।
उत्तर : तमु ल्होसारको शुभकामना
३) तल दिइएका बुँदाहरुका आधारमा पत्रिकामा प्रकाशित गर्नका लागि ' समवेदना तथा श्रद्वाञ्जलि ' को नमुना तयार गर्नुहोस् :
नाम् : दयावीर कार्की
जन्म : १९९० बैशाख १०
मृत्यु : २०६७ बैशाख २९
मृत्यु हुनुको कारण : हृदयाघात
योगदान : गाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी , झुलुङ्गे पुल निर्माण गरेको ।
पत्नीको नाम : धनमती कार्की
जन्म: १९९० बैसाख १० | मृत्यु: २०६७ बैसाख २९
क्रियाका भाव, उक्तिपरिवर्तन र वर्ण र अक्षर
गयो - सामान्यार्थ
जा - आज्ञार्थ
गएस् - आज्ञार्थ
जाला - सम्भावनार्थ
जानु - आज्ञार्थ
पढ्छ - सामान्यार्थ
पढ् - आज्ञार्थ
पढेस् - आज्ञार्थ
पढ्ला - सम्भावनार्थ
पढ्नु - आज्ञार्थ
रामले भन्यो, ‘म एउटा कलम किन्छु ।’
रामलेके भन्यो भने ऊ एउटा कलम किन्छु ।
बालकले भन्यो, ‘मेरो पेट दुख्यो ।’
बालकले आफ्नो पेट दुख्या भन्ने जानकारी दियो ।
वर्ण र अक्षर:
वर्णको परिचय एकाइ एक ‘अ’, ’आ’ मा रहेको छ ।
अक्षरको पहिचान एकाइ दुई ’आ’ मा रहेको छ ।